एनआरएन उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने डा. बद्री केसीको घोषणा – News Portal of Global Nepali
एनआरएन उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने डा. बद्री केसीको घोषणा
लण्डन– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का महासचिव डा बद्री केसीले आगामी कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । एनआरएनको नवौं विश्वसम्मेलन आगामी अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।
स्थापनाकालदेखि नै एनआरएन गतिविधिमा होमिएका केसी हालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिमा सबैभन्दा अनुभवी व्यक्तित्व चिनिन्छिन् ।
एनआरएनको स्थापनाअघि यसको कन्सेप्ट बनाउने देखिनै संस्थाका अभियन्ता डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेसँगसँगै असभउानमा होमिएका केसी २००३ देखि २००७ सम्म् आईसीसी रुसको साधारण सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि २००७ देखि ००९ सम्म आईसीसी रुसको महासचिव भएर काम गरेका उनी २००९ देखि भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) प्रवेश गरे ।
२००९–२०११, २००११–२०१३ गरी दुई कार्यकाल आईसीसी सदस्य रहेका उनी २०१३–२०१५ मा भने कोषाध्यक्ष चयन भए । त्यसपछि २०१५ देखि २०१९ सम्म दुई कार्यकाल महासचिव रहेका उनले अहिले आएर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेका हुन् ।
हाल उनी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नीति निर्माण समिति कार्यदलको संयोजक समेत रहेका छन् । यस्तै उज्यालो नेपाल, आर्थिक सुदृढता कार्यदल, राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्द्धन समिति लगायतमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग रहेको छ ।
महासचिवको हैसियतमा संघको पंजीकृत सदस्यतालाई डिजिटलाइज गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण मेम्बरसिप इन्फरमेशन सिस्टम २०१५ मा सुरु भएतापनि १९ मा पुग्दा सफल कार्यान्वयन भएको छ । यसैको परिणामस्वरुप २०१९ को पंजीकृत सदस्यता विश्वका सबैजसो एनसीसीले कार्यान्वयनमा ल्याएको दावी उनको छ ।
संघका पंजीकृत सदस्यका लागि बनाइएको ग्लोबल आईडी कार्ड र यसबाट बेनिफिट दिने कार्यमा पनि धेरै समय खर्चेको कुरा उनले बताए । यो कार्डले सदस्यमात्र होइन अब उनका परिवारका सदस्यले समेत बेनिफिट लिन सक्ने उनको भनाई छ ।
उनले शेष घले अध्यक्ष हुँदा निर्णय गरिएको भिजन २०२० लाई कार्यान्वयनमा लैजान थुप्रै नीति बनाउँदै गरेको बताउँदै उनले यो छिट्टै पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने पनि बताए ।
अमृत साइन्स कलेजबाट १९९० मा आईएस्सी गरेका उनले १९९६ मा बायो टेक्नोलोजीमा रुसको मस्कोबाट इन्जिनियरिङ गरेका हुन् । त्यसपछि बायो टेक्नोलोजीमै मस्कोबाट २००१ मा पिएचडी समेत गरेका उनले २००९ मा मस्को स्टेट यूनिभर्सिटीबाट ईएमबीए पनि गरे ।
फाइनान्स, हाइड्रो, कृषि, इन्सुरेन्सका साथै आयात निर्यातमा लगानी गरेका उनी नेपालको चिया निर्यातकर्ताका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।